Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: fahafatesan’olona noho ny tsy fitandremana | NewsMada
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: fahafatesan’olona noho ny tsy fitandremana
Efa tsy fahampiana fitandremana tsy azo leferina
Olona roa no namoy ny ainy tra-doza noho ny fivadihan’ ny taxi-brousse nitondra azy any an-kady. Taitra ny tena namaky ny vaovao. Sao dia diso gazety aza ka nanamarina ny daty. Tsy ny mpanoratra koa no nifandiso, sanatria lany vaovao ka namerina fitantarana vaovao efa noresahina. Tsy ilay loza nitranga teo aloha tany amin’ny Làlampirenena faha 2 no nisehony, ity noresahany androany kosa tamin’ny Làlampirenena faha 7.
Miampy ny Làlampirenena voalohany sy faha 4, dia ireo no mifandimbidimby ahenoana fitrangan’ny lozam-pamoivoizana miteraka fahafatesan’olona. Na tsy te hirona any amin’ny fanaovana safobe mantsina aza, dia tsy mety ny tsy hanipika fa mazàna Sprinter no taxi-brousse niharan’izany. Ankoatra ny faharantsiam-bintana toy izao fiharan’ny loza-pifamoivoizana izao, inona moa ny antony ahafantaran’ny maro izany Sprinter izany, tsy ny fahafahany mirimorimo haingana ve ? Noho izay, dia ny fitondrana azy diso haingana loatra no tonga ao an-tsaina raha maheno ny fitrangan’ny loza.
Mitsara tsy mahita angamba, hoy ny mpiaro ny mpamily ireny Sprinter ireny. Ampahafirin’ny fiara afaka mandeha mafy, hoy izy ireo ? Marina fa misy sasantsasany amin’ny fiara madinika no mirimorimo lavitra, na ireo tsy dia madinika loatra, toy ny 4X4 be fofon’aina. Na izany na tsia, olona vitsy no mitaingina azy ireny, ary tsy miantoka ain’olona maro nanankina fitokisana tamina mpitatitra nanefany saran-dàlana. Ho fitandrovana ny fizorana am-pahatonin’ny olona rehetra mampiasa ny làlana iombonana, dia efa misy ny fepetra mifehy ny fandehanana arakaraky ny haben’ny fiara. Sanatria ve tsy zakan’ny sain’ireo mpamily Sprinter ny fifehezan-tena mba tsy hihoatran’ny fitsipika efa voafetra, ka tsy tsindry ny tsy hampiasa ny herin’ny fiara izay iandraiketany ? Rariny raha miverimberina izay fanontaniana izay : azon’
ny mpamily taxi-brousse rehetra an-tsaina tsara ary zakany va ny fandraisana sy fahazakana adidy amin’ny maha tompon’antoka azy eo amin’ny fanatanterahany ny asany ? Azo isalasalana ny famaliana izany.
Na ny tompon’ny fiara na ny mpamily mpikarama, rehefa mandeha ny tsena dia toa samy tsy misalasala amin’ny fanankinana ny fitondrana ny fiara amin’ny mpamily adiny dimy ao aorian’ny fotoana nahatongavany rehefa nanao lava-alina avy any an-tany lavitra. Indraindray, na voarara aza ny fifohana sigara ao anaty fiara, dia mangalatra mifoka ny mpamily ho fiadiany amin’ny torimaso. Misy fotoana aza, araky ny fitantaran’ny mpandeha, dia mamofona ravinkazo ny setrok’ilay sigara. Resaka daholo izany. Ny hany fantatra moa dia na ny fifehezana ny fotoana ahafahan’ny mpamily hibata «vôlan» aza dia tsy misy, nefa izay angamba dia fepetra ahafahana misoroka loza maromaro.